Ghostwriter BWL Waxaan hayaa qoraalkaaga oo ay qoreen joornaallo xirfadlayaal ah
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah maamulka ganacsiga
Dhaqaaleyahannada ganacsiga waxay xakameeyaan oo ay kormeeraan geeddi-socodka iyo macaamillada dhaqaale! Maamulayaal ganacsi oo karti iyo khibrad leh ayaa ka shaqeynaya ku dhowaad dhammaan qeybaha nidaamka dhaqaale. Maamulka ganacsigu waa nidaam hoosaad dhaqaale. Maamulka guud ee ganacsiga wuxuu ka shaqeeyaa go'aaminta abaabul, xisaabeed. Waxay bixinaysaa dulmar guud oo ku saabsan mawduucyo maadooyin kala duwan leh sida maalgelinta, wax soo saarka iyo maalgashiga. Maamulka ganacsigu wuxuu sharraxayaa xakamaynta, maaraynta iyo abaabulka shirkad dhaqaale waxayna ku saleysan tahay fikirka ah in badeecaduhu yar yihiin oo ay tahay in loo maareeyo dhaqaale ahaan. Ku saabsan Suuqyada dhacaya qiimaha yihiin muujinta yaraantan. Ee loogu yeero. Si loo gaaro guul ama ujeedooyin dhaqaale, shirkaduhu waxay u dhaqmaan si waafaqsan mabda'a dhaqaale. Farqiga ayaa halkan lagu sameeyaa inta udhaxeysa mabda’a ugu yar iyo kan ugu sareeya. Hadafyada shirkaddu sidoo kale waa muhiimad weyn oo aasaas u ah dhammaan howlaha ganacsiga. Ujeeddooyinka shirkadeed waxaa loo dejiyey iyadoo lagu saleynayo bayaanka howlgalka shirkadaha waana nooc ka mid ah hanuuninta dhammaan shaqaalaha shirkadda, gaar ahaan maamulka shirkadda iyo shaqaalaha maamulka. Hadafyada shirkadeed waa lagu kala duwanaan karaa iyadoo loo eegayo nuxurka bartilmaameedka, baaxadda bartilmaameedka, tixraaca waqtiga iyo sideha bartilmaameedka. Waxaa lagu kala soocayaa himilooyinka qiimaha / yoolalka rasmiga ah (faa'iido, koritaanka iwm), kan Ujeeddooyinka (xaqiijinta) iyo yoolalka aadanaha (xiriirka bulshada). Yoolalka tirada waxaa ka mid ah kordhinta faa'iidooyinka iyo yoolalka tayada leh ee kordhinaya qanacsanaanta macaamilka iyada oo loo marayo adeeg wanaagsan. Marka laga soo tago aasaasiga, waxyaabaha ku jira sida habka waxqabadka ganacsiga, hay'adaha sharciga iyo qaab dhismeedka sharciga (sharciga qandaraaska, qandaraaska iibka, heshiiska shaqada, iwm.) Ayaa lala tacaalayaa. Meelaha kale ee ugu waaweyn ee daraasaddu waa suuqgeynta iyo abaabulka iibka, qorsheynta wax soo iibsiga iyo maareynta qalabka, iyo sidoo kale qaababka macaamil bixinta. Mawduucyada sida qaababka sharciga ah ee shirkadaha, maalgashiga iyo maalgelinta, noocyada cashuuraha, qorsheynta shaqaalaha iyo qaababka mushaharka iyo sidoo kale abaabulka xafiiska ayaa si qoto dheer loo baarayaa. Qayb muhiim ah ayaa sidoo kale ah xisaabinta sida ku xusan HGB iyo kharashka iyo xisaabinta waxqabadka. Xisaabinta ayaa ah taas qaybta ururada shirkad la macaamil ah Xisaabinta heshiisyo. Waxay kuxirantahay baaxada iyo nooca abaabulka, macno ayey leedahay in xisaabaadka loo qeybiyo xaafado hoosaadyo, tusaale ahaan. B. ku jira Xisaabinta maaliyadeed, xisaab celinta, xisaabaadka la bixin karo iyo Xisaabinta mushaharka. Shuruudaha waxaa kamid ah Tirintii, tiradii, xisaabtii dheelitirka iyo koontada faa'iidada iyo khasaaraha, das Xeerka Dardaaranka Xisaabaadka, laba-xisaabinta xisaabinta iyo sidoo kale Xisaabaadka sanadlaha ah iyo Warbixinta maamulka. Qiimaha iyo xisaabinta waxqabadka (KLR) waa qeyb ka mid ah gudaha Xisaabinta waxayna u adeegtaa inay bixiso macluumaad muddo gaaban ah qorshaynta hawlgalka. Mid baa kala saara Nooca kharashka xisaabinta, Xisaabinta xarunta kharashka la BAB, Qiimaha xisaabinta waqtiga qiimaha, Xisaabinta qiimaha, Xisaabinta tirada yar iyo Xisaabinta kharashka la qorsheeyay. Faa'iidada hawlgalka ama khasaaraha hawlgalka waxaa lagu go'aamiyaa KLR. The qorshaynta istiraatiijiyadeed ee muddada-dheer waxay la dhacdaa Xisaabinta maalgashiga.
Sida aad u aragto, aagga mas'uuliyadda waa mid aad u xiiso badan oo ballaadhan. Arday ahaan, waxaa muhiim ah inaad gooni u gooni ka dhigto ardayda kale ee aad waxqabadka akadeemiyadeed aad u wanaagsan si aad si guul leh ugu soo gasho nolol xirfadeed dhamaadka waxbarashadaada.
Kaliya noo soo dir wax aan ku xirneyn baaritaan markaa si dhakhso leh ayaan kuu caawin doonnaa!
Kooxdayada qorayaasha waxay ka kooban yihiin qoraayo meelo kala duwan ka yimid. Dhaqaalayahanada ganacsiga iyo injineerada warshadaha waxay leeyihiin xitaa darajooyinka ugufiican suunka hoostooda waxayna ku farxi doonaan inay kula taliyaan. Waxaad sidoo kale awood u yeelatay inaad hesho waayo-aragnimo xirfadeed oo aad cusbooneysiisay!
Noo soo dir baaritaan hadda ama si fudud noo soo wac si aan wax badan uga ogaano adeegyadayada! Intaas then
Qoraalka ghost ee daraasaadka maamulka ganacsiga
Koorsada dhaqaalaha waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu caansan ardayda waxaana hadda laga bixiyaa ku dhowaad jaamacad kasta ama kulleej kasta. Arday ahaan, waxaa muhiim ah in aad ka soo dhex baxdo ardayda kale ee aad la shaqaysid waxqabadka akadeemiyadeed ee aadka u wanaagsan. Tan waxaa ka mid ah gaar ahaan meelaha:
daraasadaha guud ee ganacsiga
Maamulka & maamulka shirkadaha
Ka dib markay heleen shahaadada bachelorka, qalin jabiyayaashu waxay leeyihiin fursado kala duwan oo ay ku qaabeeyaan shaqooyinkooda. Waxaad bilaabi kartaa inaad si toos ah u shaqeyso ama aad u sii wadato waxbarashadaada oo aad si toos ah ama waqti dhiman u raadsato shahaadada mastarka Dhameystirka wanaagsan ee shahaadada bachelor-ka ayaa shardi u ah gelitaanka shahaadada mastarka. Tani waxay markaa guud ahaan xaq u siinaysaa qofka haysta inuu sii wado dhakhtar. Qalin jabinta ka dib, ardaydu waxay sidoo kale ka shaqeyn karaan cilmi baarista ama geli karaan waxbarashada dadka waaweyn. Waxaas oo dhami waa kuu furan yihiin!
Qalin jabinta ka dib, ardaydu waxay ku sii jiri karaan cilmi baarista si ay u sameeyaan shahaadada PhD. Mowduucyo badan oo cilmi baaris ah ayaa isku dhafan taas Dhaqaalaha.
Ma ogtahay in maamulka ganacsiga uu ka mid ahaa maaddooyinka ugu caansan Jarmalka sanado badan? Sababtoo ah qalin jabinta kadib, waxaad filan kartaa shaqo aad ufiican iyo rajo mushahar. Kadib barashada maamulka ganacsiga, waxaad noqon doontaa aqoonyahan guud oo tababaran. Dhaqaaleyahannada ganacsiga waxaa badanaa laga raadsadaa dhammaan warshadaha. Dhaqaaleyahannada ganacsiga ayaa si gaar ah caan uga ah maaliyadda iyo maamulka waaxda bangiyada iyo shirkadaha caymiska, waaxda saadka, shaqaalaha iyo suuqgeynta iyo sidoo kale la talinta maamulka. Mushaaraadka ugu bilaabashada badan waa qiyaastii € 50.000 sanadlaha guud ee la talinta maaraynta, oo ay ku xigto aagga saadka oo leh around 46.000 oo lagu xakameynayo € 45.000.
Waxbarashadaadu waxay bixisaa jagooyin kala duwan oo mushahar fiican laga bixiyo. Dhaqaaleyahan ahaan, fursadaha horumarineed ee shirkadaha badanaa aad ayey u wanaagsan yihiin. Dabcan, waxqabadka tacliimeed ee ka sarreeya celcelis ahaan sidoo kale waa shuruud halkan, taas oo hubaal aad horeyba u ogaatay. Kuwaaga hada noo soo dir baaritaan ama iska qor telefoon ahaan nala si aan wax badan uga ogaano adeegyadayada!
Maamulka ganacsiga ee ku saabsan maareynta shaqaalaha
Sidoo kale maareynta shaqaalaha waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha bandhigyo lagama maarmaan. Qeybaha maareynta shaqaalaha iyo qorista waxaa jira mowduucyo kala duwan oo ku saabsan taageerada shaqaalaha. Iyada oo shahaadada koowaad ee bachelorka oo diiradda la saarayo maaraynta shaqaalaha, si kastaba ha noqotee, taas diyaar ayaad u tahay.
Hubinta tayada ee dhanka maamulka ganacsiga